Oromo News 07.16.21 | KWIT
Hojidhabdooni Nebraska jia darbe keessa haala hin jijiiraminiin katamaadhan gurguddaa tokko tokko keessati dabalee jira. Nebraska Department kan Labor akka jedhetti biyyati guututi May keessa hoiidhabdummaan 2.6% kan tae tureefi june keesssa ammo gara 2.5% deebie jira.
Meeda 10 kan western argamu bakka lafa baadiyaati qorannnoo warahaa haarawa baankidhan state baaye keessati dalagaa dhaabata hin taane dhukubaa gad ta’anii kan hafan ta’anis state keessati economy dabalee kan mullatuudha. Waliigallii rural mainstreet economy index june 70 irraa jalqabee July keessa ammo gara 65.6% gad deebie jira. Wannii kamuu harka 50 ol yoo kan tauu gudachuu mullisa.
Sagalan keessa kan beekaman ijoole Rosebud Sioux waggaa 140 ol biyya isaanitti ala kan jiraattan amma gara biyya isaani deebiu jiru.
Ioolen kunniin kan argaman mana barumsaa Carlisle Barracks kan Carlisle, Pennsylvania, kan argamuu mana hiidha keessa ture. Bor ganamaa Rosebud Sioux Reservation South Dakota hin dhufan jedhamuu kan eegamuu jiruudha.
Deebiani dhaabachu kan godhamuu ijoole dhalattoota biyyaa ta’an warra isaanin addaan baafamun gara wara adiiti akka dabalaman godhuun mootuman waliigala kan darbee waliin akka wal araaramanif waamicha dhiheessan yoo tau dhalattooni biyyaa baayinan akka waamicha godhan himan.